စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အကူအညီကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello | USAHello
USA တွင်, ကလူစိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထံမှအကူအညီနှင့်ကုသမှုရဖို့အတှကျအလှနျဘုံဖြစ်ပါသည်. ဘယ်သူမှသူတို့ကိုယ်သူတို့များအတွက်ကုသမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်ရှာအရှက်သို့မဟုတ်ကြောက်လန့်ရပါမည်. ဆရာဝန်များနှင့်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအမျိုးမျိုးပေး. ကွဲပြားခြားနားသောဆရာဝန်များနှင့်ကုသအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုဘယ်မှာရဖို့အထဲက Find.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များအကြံပေးခြင်းနှင့်အတူကူညီပေးနိုင်ပါသည်, ဆေး, နှင့်အခြားကုသမှု. ဒါဟာပညာရှင်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသိရန်ကူညီပေးသည်.
စိတ်ရောဂါစိတ်ရောဂါအတွက်အထူးပြုတဲ့သူဆရာဝန်တွေရှိပါတယ်. တစ်ဦးကစိတ်ရောဂါသည်အခြားစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူစိတ်ရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်ဆေးဝါးသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်. စိတ်ရောဂါမကြာခဏစိတ်ရောဂါ၏အဆိုးဝါးဆုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက်ဂရုမစိုက်.
စိတ်ပညာရှင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များမဟုတ်. သူတို့ကစိတ်ရောဂါရှာဖွေရေးမှာနဲ့ဆက်ဆံပါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆေးဝါးသတ်မှတ်ကြဘူး. တစ်ဦးကရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိတယ်အဘယ်အရာကိုနာမကျန်းတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်. စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးကသင်၏ရောဂါတစ်စိတ်ရောဂါလိုအပ်နေသည်ဟုထင်လျှင်, သူတို့သည်သင့်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်.
စိတ်ရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသူနာပြုစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အားရစရာလူနာအတွက်အထူးပြု. သူတို့ကတစ်ဦးစိတ်ရောဂါဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရုံးများသို့မဟုတ်အလုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ. သူတို့ကတစ်ဦးစိတ်ကျန်းမာရေးနာမကျန်းများအတွက်ဆေးဝါးများသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်.
စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုပြုမူဆက်ဆံသူကိုသည်အခြားလိုင်စင်ရပညာရှင်များရှိပါတယ်. သူတို့ကတိုင်ပင်မှူးမတ်တို့ပါဝင်သည်, ကုသ, နှင့်လူမှုရေးလုပ်သားများ. သူတို့ထဲကတချို့ကတဦးတည်းဧရိယာအာရုံစိုက်စေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောအိမ်ထောင်မင်္ဂလာအဖြစ်, မိသားစု, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဒဏ်ရာ.
ဆေးရုံများမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအလုပ်, ဆေးခန်း, နှင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်. သင်သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာနှင့်အတူအကူအညီလိုအပ်တယ်လိုလျှင်, သင့်ရဲ့ပုံမှန်ဆရာဝန်ကိုမေး. သင့်ဆရာဝန်၏ရုံးခန်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှိစေခြင်းငှါ.
သင်တို့သည်လည်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအနီးစိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာတှေ့နိုငျ FindHello. သင့်ရဲ့လိပ်စာသို့မဟုတ်မြို့နာမည်ရေးထားပြီးတော့ရှေးခယျြ “ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး။”
သင်အနီးစိတ်ကျန်းမာရေးန်ဆောင်မှုမှမရနိုငျပါရင်တောင်, သင်ဆဲအကူအညီနဲ့ရနိုင်. ဤတွင် USA တွင်နေရာတိုင်းအကူအညီနဲ့ပူဇော်အချို့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်:
စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်အမေရိက၏ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်အစည်းအရုံး စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများနှင့်ကုသတစ် directory ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်.
ပြန်လည်နေရာချထားဒုက္ခသည်များ '' စိတ်ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကိုအခြားလူမြားထံမှကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်. စစ်ပွဲနှင့်အတူအတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေကို, ဘေးအန္တရာယ်, ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၏အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူနေသောပြန်လည်နေရာချထားရေးဒုက္ခသည်များအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်:
သငျသညျ၌သင်တို့ကိုအနီးဒုက္ခသည်များအတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ FindHello. သင့်ရဲ့လိပ်စာသို့မဟုတ်မြို့နာမည်ရေးထားပြီးတော့ရှေးခယျြ “ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး။”
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလုပ်သားသင်သည်သင်၏အတိတ်အကြောင်းကိုမေးခှနျးတှေမေးပါလိမ့်မယ်. သူတို့ဟာပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့အခွအေနေနားလည်ပြီးသင်ကူညီဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်ချင်. ဒုက္ခသည်တစ်ဦး upsetting သို့မဟုတ်ခက်ခဲစေခြင်းငှါအဖြစ်သင့်အတွေ့အကြုံများအကြောင်းပြောနေတာ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေး provider ကသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအကူအညီတောင်းဖို့ရှိကွောငျးကိုနားလည်. သူတို့ကသူတို့ကိုဘာမှမပြောပြရန်သင့်အားအတင်းမည်မဟုတ်. သင်သည်သင်၏အသက်တာအကြောင်းကိုပဲနည်းနည်းဝေမျှခြင်းဖြင့်စတင်ပါလိုလျှင်, ကြောင်းအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်.